WARBIXIN CUSUB: Sannadka 2017-ka oo Soomaaliya ku sagootiyey Duufaano Siyaasadeed & Halis weyn oo taagan.. – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home 2017 December W.Gudaha, Wararka Maanta, Warbixino WARBIXIN CUSUB: Sannadka 2017-ka oo Soomaaliya ku sagootiyey Duufaano Siyaasadeed & Halis weyn oo taagan..
December 31, 2017 |by W LAASCAANO| 0
MUQDISHO(P-TIMES)- Sannadka sii dhamaanaya ee 2017-ka ayaa Soomaaliya ku sagootiyey duufaano siyaasadeed oo ay adag tahay in si fudud looga dhex-baxo, bacdamaa ay ku lug leeyihiin wadamo adeegsanaya Balaayiin Dollar, iskuna ximinaya daganaanshaha yar ee kahana qaaday dalkan.
4tii bilood ee ugu dambeeyey sannadkan ayaa noqday kuwa aad xamaasad u lahaa, waxaana wararka ugu waa weyn ee laga qoray Soomaaliya ahaayeen kuwa ku saleysan isheysiga wadamada Khaliijka oo saameyn ku yeeshay.
Dawladda Faderaalka ayaa bartamihii sannadkan qaadatay qaraar ay ka soo shaqeeyeen kooxda dawladda Qadar ee kusugan Muqdisho, kaas oo ay sheegeen in ay dhex-dhexaad uga noqdeen cunaqabateyn lagu soo rogay Qadar.
Dawlad gobaleedyada dalka oo leh saameynta ugu badan wey diideen warka Villa Soomaaliya, waxayna soo saareen go’aamo ay ku cadeynayaan in ay xariirka u jareen Qadar oo aysan marnaba raali ka noqon doonin in la taagero Hoy Argagixiso.
Jawaabtii dawladda Faderaalka ee dawlad gobaleedyada ayaa noqotay weeraro lagu qaaday Koonfur Galbeed, Galmudug, Puntland, Hirshabeelle & Jubbaland, taas oo halis galisay xaaladda dalka, ilaa hadeerna wali socota.
Dawladda ayaa looga guuleystay weeraro ay ku qaaday dawlad gobaleedyada oo dhan, waxayna iskugu tageen magaalada Kismaayo oo ay ku dhisteen golaha Iskaashiga dawlad gobaleedyada oo kordhiyey xaaladda Siyaasadeed.
Labadii bilood ee ugu dambeeyey labada dal ee Qadar & Imaaraatka Carabta ayaa kordhiyey galaangalkooda siyaasadeed, waxayna dajisteen qorshe kasta oo ay awoodooda ugu adeegsanayaan, waxaana muuqda halisteeda oo an cidna ka qarsooneyn.
Dawladda Qadar oo saameyn ku leh awoodaha Madaxweynaha Soomaaliya, maadaama ay lacag badan ku bixiyeen waxay adeegsatay ciidamada Amniga ee dalka Soomaaliya, oo ay ku weerareen siyaasiinta taageersan dawladda Imaaraatka.
Shaki ma saarna in dhinacyada Imaaraatka & Qadar ay labaduba dagaalkooda u soo wareejin karaan gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaana isku adeegsiga awoodaha ciidamada oo ay isku adeegsanayaan ciidamadii Xooga dalka Soomaaliyeed.
Ma muuqato rajo laga qabi karro in laga gudbo marxaladan, Madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya-na ay qaataan go’aankooda hogaamineed oo ay garwaaqsadaan dalkan in laga keenay meel dheer, oo ay tahay in ay sii wadaan.